उर्जावान, योग्य र सक्षम युवा नेता ‘प्रशान्त’ – Satyapati
उर्जावान, योग्य र सक्षम युवा नेता ‘प्रशान्त’
हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको सोचसँगको होे । संविधानको र जनताको अधिकारको रक्षाका लागि हो ।
युवराज शर्मा, राष्ट्रिय सभा सदस्य
निर्वाचन आउन अब करिव एक हप्ता बाँकी छ । उम्मेदवारहरु प्रचार प्रसार र घरदैलोमा व्यस्त छन् । बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहमा उम्मेदवारले आफ्नो प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले ८ वटै पालिकामा आफ्ना उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउन आफ्ना सबै संयन्त्र परिचालन गरिरहेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र समग्र बाँके जिल्लामा कांग्रेस उम्मेदवारको अवस्था लगायत विविध विषयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् कांग्रेस बाँकेका पूर्वसभापति युवराज शर्मासँग गरिएको संवाद :
तपाई पनि उम्मेदवारसँगै घरदैलोमा पुगिरहनु भएको छ, कांग्रेसप्रति मतदाताको दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ ?
मतदातामा कांग्रेसप्रति उत्साह देखिन्छ । उहाँहरुको प्रतिक्रियाबाट हाम्रा उम्मेदवार उत्साहित हुनु भएको छ । पछिल्लो समय कांग्रेसप्रति बढी जनलहर देखिएको छ । यो भनेकोे लोकतन्त्रको सफलता हो । हामीसँग नेपालगन्ज र खजुरामा गठबन्धन बनेको छ । यो गठबन्धन नयाँ प्रयोग हो । यो गठबन्धन सफलभयो भने २० वर्षसम्म जान्छ भनेर प्रचण्ड जीले पनि भन्नु भएको छ ।
गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन भयो ?
पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण गठबन्धन बनेको हो । हाम्रो लडाई सोचको हो, व्यक्तिगत होइन । हामी जो सँग पनि मिलेर जान सक्छौ । हाम्रो विरोध भनेको राजतन्त्र पुर्नस्थापना गर्नेप्रति हो । ओलीले यसको सर्मथन गर्नुभएपछि हामी दुःखी भएका हौँ ।
युवराज शर्मा, राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् कांग्रेस पूर्वसभापति बाँके ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको निर्वाचनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको सोचसँगको होे । संविधानको र जनताको अधिकारको रक्षाका लागि हो । विगतमा हामीले एमाले पार्टीलाई पनि हेर्यौं । दुई तिहाईको सरकारलाई पनि हेर्‍यौं । हामीले राप्रपालाई पनि हेर्यौं । जनता यति अगाडी बढिसक्यो कि पुरातनवादी सोचलाई जनताले अब विश्वास गर्दैन । कतिले भ्रष्टाचार गरेका पनि सुनिए । सबैभन्दा ठुलो कमजोरी एमालेले देखायौ । त्यसैले पनि यो निर्वाचन कांग्रेसले जित्नैपर्छ भन्ने लाग्छ र महत्वपुर्ण पनि छ । नेपालगन्जको निर्वाचन हाम्रो पक्षमा गईसकेको छ । ठुलो मतअन्तरले हाम्रा उम्मेदवारले चुनाव जित्दै हुनुहुन्छ ।
नेपालगन्जको नगर प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवार कत्तिको योग्य हुनुहुन्छ ?
मैले सबै उम्मेदवारलाई राम्ररी चिनेको छु । प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दा कांग्रेसहित गठबन्धनका तर्फबाट नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख कमरुद्धिन राई जनताको काम ब्यक्ति हो । अन्य उम्मेदवार भन्दा म चाही गठबन्धनका उम्मेदवार प्रशान्त विष्ट र कमरुद्धिन राईलाई छनोट गर्छु ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा जनताले कांग्रेसलाई भोट किन दिने ?
कांग्रेससहित गठबन्धनको साझा उम्मेदवार प्रशान्त विष्ट उर्जावान, योग्य र सक्षम युवा नेता हो । एउटा कारण त उहाँ पहिलेदेखी नै एउटै पार्टीमा भएर काम गर्नुभएको हो । काम गर्न सक्ने क्षमता भएको, जोश जाँगर भएको युवा भएका कारण पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अर्को कारण यसपटक पाँच दलबीच गठबन्धन बनेको छ । यसपटक नजिते कहिले जित्ने ?
विष्टले नगर प्रमुखमा जित्नु भयो भने नेपालगन्जका लागि मुख्य रुपमा के काम गर्न आवश्यक छ ?
यसका लागि त सबैले आ, आफ्ना योजना सहितका घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । निर्वाचित भएपछि आफूले घोषणा गरेका योजना कार्यान्वयन गर्नुस् यति भयो भने नेपालगन्जलाई पुग्छ । नेपालगन्ज देशमा एउटा राम्रो नमुना शहर बनोस् ।
उम्मेदवारै नभएको ललितपुरमा रुख दोस्रो स्थानमा
‘जानकीको विकास कांग्रेसको काँधमा छ’-छब्बन खाँ
मत कम खस्नु राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वास
हैरान टोली चलचित्रको प्रमोशन बुटवल
आगामी कार्यकालमा अवसर पाएमा अझै प्रभावकारी काम गर्छो :चौधरी
बैशाख ३० गते सार्वजनिक सवारी चलाउन नपाइने, क-कस्लाई छ छुट ?